Mogadishu Journal » Carrick ayaa si buuxda diirada u saaray Chelsea iyadoo Man Utd ay ku dhowdahay Rangnick
Michael Carrick ayaa ku adkeysanaya inuu si buuxda diirada u saarayo diyaarinta Manchester United kulanka axada ee Chelsea, iyadoo Red Devils lagu soo waramayo inay qarka u saaran tahay inay u magacawdo Ralf Rangnick.
Sida ay sheegayaan wararku, 63-sano jirkaan ayaa lagu wadaa inuu si ku meel gaar ah u qabto shaqada Old Trafford inta ka harsan xilli ciyaareedkan, iyadoo Ole Gunnar Solskjaer la ceyriyay ka dib guuldaradii 4-1 ee ka soo gaartay Watford isbuucii hore.
Red Devils ayaa la rumeysan yahay inay heshiis la gaartay Rangnick iyo Lokomotiv Moscow, halkaasoo uu ka yahay madaxa isboortiga iyo horumarinta.
Carrick, oo caawiye u ahaa Solskjaer, ayaa kormeeray guushii ay United 2-0 kaga badisay Villarreal ee Champions League Talaadadii, waxaana uu sii ahaan doonaa masuulka kulanka isbuucaan ay la ciyaarayaan hogaamiyayaasha Premier League ee Chelsea.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe, kaasoo ciyaaray in ka badan 450 jeer, islamarkaana shan koob oo Premier League ah kula guuleystay Old Trafford, ayaa hammigiisa si adag u dejiyay safarka Stamford Bridge.
"Mustaqbalkaygu waa labada ama saddexda maalmood ee soo socda - taasi waa inta aan diyaar u ahay inaan eego," ayuu yidhi. "Taasi waa habka saxda ah ee loo maro.
"Kubadda cagtu waa nooca ganacsiga - marna ma ogaan kartid waxa geeska ku yaal waqtiga ugu fiican. Dhammaan tamartayda waa axada.
"Waan xakameyn doonaa waxa aan xakameyn karo, sidee ayaan ugu diyaariyaa kooxda kulanka soo socda, wax walba oo kale maaha inaan ka walwalo ama aan ku lug yeesho."
“Runtii waxaan eegayaa ciyaartan soo socota, ciyaar weyn, wax kasta oo dhaca intaa ka dib waa inaan sugno oo aragnaa.
"Naftayda maan dhigin booskan, laakiin inaan ka qaybgalo kulan weyn oo kan oo kale ah - ciyaaryahan ahaan ama tababare ahaan - waa ciyaar aad u adag.
“Inaan la ciyaarno Chelsea, had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa na xafiiltama markii ugu horreysay ee aan halkan imid. Taariikh ayaan la leeyahay iyaga, laakiin waanu ku guulaysanay tartankaas.”
Kulanka ugu horeeya ee Rangnick uu hogaamiyo ayaa noqon doona kulanka ay gurigooda kula ciyaari doonaan kooxda Arsenal todobaadka soo socda.
Jarmalku waxa uu maamulay shan kooxood oo Bundesliga ah,waxana uu Schalke ku hogaamiyay in ay ku dhameysato kaalinta labaad 2004-05.
Waxa uu sidoo kale u horseeday inay ku faanaan DFB-Pokal lix sano ka dib, iyo sidoo kale semi-finalka Champions League.